COVID yakauraya Ekundo! Aloha kuAfrica Shumba muWaikiki
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » COVID yakauraya Ekundo! Aloha kuAfrica Shumba muWaikiki
Hawaii Kupwanya Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
COVID yakauraya vangangoita mamirioni mashanu vanhu kubva payakave denda mukutanga kwa5.
Kazhinji kanganwaira ndiyo mhuka zhinji dzinofa neCOVID. Mumwe aive Ekundo, shumba yeAfrica inogara muHonolulu Zoo muWaikiki, uye inodikanwa zvakare nevashanyi kwemakore mazhinji kuti vaone.
Meya we Honolulu Rick Blangiardi akazivisa kufa kweshumba yechirume yemakore gumi nematatu.
Shumba yakafa nemamiriro ezvinhu ehutano neMuvhuro pa Honolulu Zoo muWaikiki
Shumba dzechikadzi dzeEkundu nemakore gumi nemaviri, Moxy, vakatanga kuratidza zviratidzo zvechirwere chepamusoro chekufema nevamwe vachikosora neMuvhuro, Gumiguru 12, 4.
Samples dzakabva dzaunganidzwa kubva kushumba dzese kuyedza SARS-CoV-2, hutachiona hunokonzera COVID-19 muvanhu.
Ekundu, uyo akarapwa pfari kwemakore anodarika mashanu, akatanga kurwara kusvika asisina kudya. Pane imwe nguva paakange asisagone kurapwa nemushonga wake wekutsigira muzvikafu, zvikwata zvekuchengetwa kwezvipfuyo nemhuka zvakasarudza kumuomesa kuti ape kurapwa kwakadai semishonga inorwisa mabhakitiriya, kurapa kwemvura, uye mimwe mishonga yekumubatsira kuti anzwe zvirinani. Panguva imwecheteyo, mimwe mienzaniso chaiyo inogona kuunganidzwa kuti ienderere mberi nekuongororwa kwezvimwe zvinokonzeresa zvechirwere chake chekufema. Zviratidzo zvepamusoro zvekufema zveEkundu zvakagadziriswa mukupindura kurapwa, asi akatanga kuratidza zviratidzo zvechirwere chepasi chekufema nekuwedzera kunetseka kufema mumazuva mashoma anotevera. Kunyangwe paine kutenderera-kwewachi-kuwongorora uye kuenderera mberi nekurapwa, Ekundu akashaya vhiki imwe mushure mekunge zviratidzo zvake zvatanga.
Nekuda kwekuyedzwa kuri kuitwa kumarabhoritari ekumaodzanyemba, mhedzisiro inoratidza shumba dzese dzaive dzakanaka kuSARS-CoV-2 yakangotambirwa mushure mekufa kwaEkundu. Mukufungidzira kwe COVID chinongedzo, vashandi vezvekurapa vezvipfuyo vakatanga marapirwo uye biohazard protocols zvinoenderana nezvimwe zvakabvumiranwa neAZA mosio mukupindura kuputika kweSARS-CoV-2 kutenderera nyika. Zoo veterinarian Jill Yoshicedo akagovana kuti "kunyangwe hazvo hutachiona hweSARS-CoV-2 mumakati makuru asiri emombe dzave hurwere hushoma hunopindura nekuchengetwa, Ekundu, zvinosuwisa, ndeimwe yenyaya nyowani apo COVID inoita kunge yakabatana neyakaipisisa mabayo uye kurasikirwa kukuru kwehupenyu muzvinhu izvi. ”
The nzvimbo inochengeterwa mhuka parizvino akamirira kuedzwa kwekusimbiswa kweSARS-CoV-2 pamwe nezvibodzwa zvechirwere izvo zvichabatsira kuona kukura kwebasa iro hutachiona hwehutachiona hwakatamba mukufa kwake. Kunyange zviratidzo zvaMoxy zvaiita kunge zvinokurumidza kudzikira, vashandi vari kunyatso tarisa uye vachiramba vachimupa rutsigiro uye kurapwa. Mamiriro aMoxy anoita kunge akagadzikana parizvino uye munzira yekuzorora zvizere.
Kwabva hutachiona hweshumba kunoramba kusingazivikanwe. Vashandi vese vaiwirirana zvakanyanya neshumba vakambobayiwa nhomba uye vachitevedzera mutemo wekubaya vachengeti veguta. Ivo vakaedzwawo COVID-19 uye vakawanikwa vasina. Vashandi veZoo vanoenderera mberi nekudzidzira maitiro akaomarara ebiohazard ekudzivirira chero hutachiona hwehutachiona kune dzimwe nzvimbo dzemhuka.
Zoo Director Santos akati, “Ndinorumbidza vashandi vedu vezvemhuka nekuchengeta nekushinga kwavo uye nekuchengeta kwavo Ekundu. Sezvo chete shumba yechirume paHotolulu Zoo, Ekundu aive anodikanwa uye aive nemifananidzo. "Zoo ohana inosuruvara zvikuru nekupfuura kwake, uye vari kushanda pamwechete kuti varambe vakatarisa pahutano nekugara zvakanaka kwaMoxy, uye nekuchengetwa kwemhuka dzedu dzese dziri munzvimbo inochengeterwa mhuka." Santos akaenderera mberi achiti, “Sezvo mhuka dzichigona kubatirana COVID-19 kubva kuvanhu, vashandi vedu vanoyeuchidzwa kuti vagare vachishanda zvakaringana uye vachitevedzera mitemo yekuchengeta zvipfuyo zvedu zvakachengeteka. Tinoda zvakare kutora mukana uno kuyeuchidza vese vashanyi vanoshanyira zoo kupfeka chifukidziro munzvimbo dzinozivikanwa dzine njodzi dzemhuka dzinosanganisira nyani, katsi, imbwa, uye mahwanda. ”
Ekundu akazvarwa musi waNovember 2, 2007, uye akauya kuHonolulu Zoo muna 2010. Pamwe chete nemumwe wake, Moxy, vakarera vana vatatu veshumba avo vakaendeswa kune dzimwe nzvimbo dzekuchengetedza sechikamu cheAssociation of Zoos and Aquarium's (AZA) Species. Kupona Chirongwa. Shumba dzemuAfrica dzinogara makore anosvika gumi nemashanu kusvika makumi maviri neshanu.